Itanhangá: nantsi indlu yakho
UAndrea unezimvo eziyi-743 zezinye iindawo.
Ngeziganeko, khangela ixabiso. Qwalasela ubuninzi babantu abangama-30.
Indlu entle e-Itanhangá ene-320m2, phambi kwe-Itanhangá Golf Clube!
Ukuthuthuzela, ukhuseleko, inhlalakahle kunye nokuphumla kumagumbi e-3 kunye namagumbi okulala angama-3 akhoyo, ii-2 zokuhlambela ezigcweleyo, enye enebhafu ye-jacuzzi (ukongeza kwindlu yangasese yeendwendwe), ikhitshi enegumbi lokudlela.
Indawo enkulu yangaphandle enedama lokuqubha, i-sauna yomphunga (enegumbi lokuhlambela kunye neshawa), igadi yeentyatyambo kunye nohlaza oluninzi.
Uluntu olunamasango, ukhuseleko olupheleleyo.
I-Itanhangá yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna ukukhetha ukuya kufutshane okanye kude nesiphithiphithi sesixeko, ukonwabela ukuzola kwendawo epholileyo, kufutshane ne-Mata Atlantica, kunye nokuphithizela kweebhari kunye neelwandle eRio.
- Indawo enkulu yangaphandle enedama lokuqubha, isauna yomphunga (enegumbi lokuhlambela kunye neshawa), igadi yeentyatyambo kunye nohlaza oluninzi.
- Kukho amagumbi ama-3: igumbi lokutyela elinezihlalo ezisi-8. igumbi lokuhlala kunye nelinye igumbi lokuphumla / igumbi lemidlalo, elinokuthi lisetyenziswe njengendawo yokusebenza.
- Kukho amagumbi okulala ama-3 ane-air conditioning: igumbi lokulala lokuqala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lesibini elinebhedi enye kunye nebhedi ephindwe kabini phezulu, igumbi lesithathu lokulala kunye nebhedi ephindwe kabini phezulu.
- Kukho izindlu zokuhlambela ezi-2 ezipheleleyo ezibonelela ngamagumbi okulala ama-3, enye inebhafu yejacuzzi, indlu yangasese yeendwendwe kunye nelinye igumbi lokuhlambela elineshawari kwisauna.
-Ikhitshi elikhulu elidityaniswe negumbi lokutyela
- Ibha ejonge echibini
- 2 iindawo zokupaka endlwini kunye nenye indawo kwisitrato esiphambi kwendlu.
Kunokwenzeka ukuba uqeshe inkonzo yokutya ngamaxesha athile (isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa) esilungiselelwe yingcali. Xa kuvunyelwana ngexabiso. Ihlawulwe ngokwahlukeneyo.
Kukho iindawo zokutyela ezimbalwa kwisitrato esifanayo (imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka endlwini).
Imizuzu eli-10 kude kukho ivenkile encinci, iBarra Point, enemiboniso bhanyabhanya, iivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela.
Ukusuka kwi-mall, unokuthatha isikhephe kwaye undwendwele iziqithi ezi-7 ezintle ezibekwe eLagoa da Tijuca kwaye zijikeleze i-Itanhangá, iziqithi ezihlala abantu kwaye zineendawo zokutyela ukusuka kwezona zilula ukuya kwezona zintsonkothileyo.
Kwimizuzu 20 ufikelele Alto da Boa Vista, Vistachina kunye eyingqongileyo kunye indlela Paineiras, wona usekwe phezu veki uvaliwe ukuba izithuthi, ukuvumela ukuba mhle-4 km ukhwele, kunye nelungelo iqalele kwi iishawa ecaleni kwendlela. Ndidlala nge imbonakalo-mhlaba yaseLagoa Rodrigo de Freitas, iJokey Clube, iHorto Florestal, iJardim Botanico kunye neelwandle zaseRio de Janeiro.
Ekupheleni kohambo, ufika kwisikhululo sokugqibela semoto yentambo ekusa eCorcovado.
Umgcini uRoberto uya kufumaneka ukuze acombulule imiba yendlu xa kuyimfuneko.
Ulwamkelo lwenzelwe umntu kwaye kukho ithuba lokuba ube nompheki oqeqeshiweyo oza kuhoya izicelo zezidlo ezikhethekileyo.
Xa kuvunyelwana ngexabiso. Ihlawulwe ngokwahlukeneyo.
Ulwamkelo lwenzelwe umntu kwaye kukho ithuba lokuba ube nompheki oqeqeshiweyo oza kuhoya iz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Itanhangá